News 18 Nepal || “जनताहरुलाई फेरी पनि अँध्यारोमा धकेल्ने प्रयत्न गरियो भने क्षम्य हुने छैन”
राधा पोखरेल । हामी अहिले राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले संक्रमणकालमा छौं । संक्रमणकाल समाजका लागि प्रसवकाल हो । प्रसव वेदना सहन निकै गाह्रो हुन्छ, तर सहनुको विकल्प पनि हुँदैन । सधै जसो राष्ट्रिय राजनीतिक माहोलले सरगर्मी बढ्ने हाम्रो देश कुलमान प्रकरणले यसवेला सडक देखि सदन सम्म तातिरहेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको पक्कै पनि विधिको शासन हो । अराजकता लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ! यसको अर्थ यो पनि होइन कि, लोकतन्त्रमा बाँच्न, बोल्न, लेख्न र आलोचनाको स्वतन्त्रता नै हुँदैन । यदि सरकार साँच्चिकै प्रणालीहरु व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग यसरी डराउँन मिल्छ ? सरकार, कुरा सम्बृधिको सँगै संस्कृको पनि हो । समुन्नत संस्कृति विना सम्बृद्ध समाज निर्माण सम्भब छ र ?